Ny manjò ireo vehivavy Afghàna eo ambany fitarihan’ny Talibana indray · Global Voices teny Malagasy
Voadona mafy nandritra ny ady am-polo taona maro ny vehivavy Afghàna
Voadika ny 02 Septambra 2021 4:10 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Português, русский, عربي, українська, polski, 日本語, Esperanto , Ελληνικά, Français, English
Pikantsary tamin'ny tafatafa tao amin'ny TRT World niaraka tamin'i Mahbooba Seraj, mpikambana ao amin'ny Tambajotran'ny Vehivavy Afghana.
“Izahay, Afgàna dia te hiteny amin'izao tontolo izao, fa nilaozan'izy ireo manirery izahay, hoviravirain'ny amboadia ato amin'ny firenenay. Tsy mazava amiko i Etazonia noho ny fandravana sy ny famerenana indray ny Taliban eto Afghanistan izay fanapahan-kevitra hisy akony indrindra amin'ny fiainan'ny vehivavy, izay ho rava indray. Mahatsapa tahotra goavana ho an'ireo mpanakanto, mpihira, mpanefoefo amin'ny fandraharahana izay hampiato ny asany tahaka ny efa nataon'izy ireo talohan'ny nanjakan'ny Taliban tamin'ny taona 1990 aho, “hoy ilay mpikatroka zon'olombelona malaza ao Afghanistan Mahbooba Seraj, raha niresaka tamin'ny TRT World vao tsy ela akory izay.
Rehefa nifehy ny ankamaroan'ny faritanin'i Afghanistan ny Taliban tamin'ity volana ity, ka i Kabul no tanàna farany nianjera tamin'ny 15 Aogositra, dia niteraka korontana izy ireo. Nandositra tany UAE ny filoha Ashraf Ghani rehefa avy nanasonia fifanarahana fibabohana tamin-dry Mullah Ghani mirahalahy avy.
Satria mifehy tanteraka ny firenena ny Taliban ankehitriny, tavela ao anaty tahotra sy tsy fahatokisana ny olom-pirenena Afghana satria mandositra an'i Afghanistan ireo diplaomaty, sy ireo solontenan'ny fikambanana iraisam-pirenena .
Miaina indray ny taona 1994 ireo Afghana efa reraky ny ady, rehefa nanafika ny governemantan'ilay mpitarika Afghan tamin'izany Dr. Najeeb ny Taliban, sy nifehy an-keriny an'i Kabul, ary nametraka fitondrana islamika notarihin'i Mullah Umar.
Niteraka herisetra bebe kokoa teny ifotony ny fisintahan'i Etazonia tampoka sy ny tsy fahombiazan'ny fifampiraharahan'ny telo tonta tany Doha, nampahatsiahy ny Afghana ny zavatra nosedrain'izy ireo 25 taona lasa izay: fahaverezan'ny rafitra ara-tsosialy sy ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana, ny fanesorana ny zon'ny vehivavy, ary ny fanakatonana tanteraka ny rafi-pampianarana.
Vokatr'izany, maro no mandao an'i Afghanistan noho ny tahotra ny amin'ny ho avy. Iray amin'izany olona izany i Gull Muhammad.
Ho an'i Gull, izay nandositra niaraka tamin'ny fianakaviany iray manontolo niala tao Spin Boldak, tanàna manamorona ny sisin-tanin'i Pakistan tamin'ny 7 Aogositra ,tsy nisy dikany firy ny hijanona ao raha vantany vao tonga tao an-tanàna ireo mpiady Taliban. Tadidiny tsara ny fomba nanandevozana ireo vehivavy, noterena hanambady ireo miaramila taliban sy nijangajanga nandritra ny fitondran'ny Taliban teo aloha. Nanazava i Gull tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices:
Nahita lehilahy nitondra môtô Honda niaraka tamin'ny turbans teo an-dohany, ary koa basy vita tànana aho nandritra ny misasakalina no sady mihiaka hoe ‘Allah-u-Akbar’ ary niditra tao Spin Boldak. Tamin'izay aho no nanapa-kevitra ny hitady toerana azo antoka kokoa ho an'ny fianakaviako. Niala ho any Pakistan aho, niampita ny vavahady sisintany Chaman. Fantatry ny mponina ao Spin Boldak fa tsy afaka manohy miaina am-pilaminana ao amin'ilay faritra izy ireo noho ny tahotry ny fahatongavan'ireo Taliban manana fikasana toy ny teo taloha.
Niampita nankany Pakistan niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany dimy i Gull , ary koa ny vadin'ireo rahalahiny sy ny zanak'izy ireo telo. Nahazo fanampiana avy amin'ny lehilahy iray antsoina hoe Bakhtiyar, tompon'ny efitrano fampiratiana kodiarana moto izy tao . Nanazava i Gull fa nitondra firavaka sy lamba niaraka tamin'izy ireo izay kasain'ny fianakaviana hampiasaina mba hivelomana any Pakistan ireo vehivavy. “Handeha ho any Quetta renivohitr'i Balochistan aho izao ary avy eo ho any Karachi, mikasa hipetraka ao an-tranon'ny zanako vavy, izay mipetraka miaraka amin'ny vadiny any aho,” hoy i Gull rehefa niala sasatra niaraka tamin'ny fianakaviany tao anaty hafanana be anatin'ny efitrano fampirantiana.
Nanampy an'i Gull i Bakhtiyar tamin'ny fandaminana fiara mandeha maotera izay nitondra ny fianakavian'i Gull nankany Quetta. “ Tonga teto tao anatin'ny fahaverezam-panantenana, nitady fiarovana ny fianakaviana Pashtun. Nomeko sakafo sy fialofana izy ireo, ”hoy i Bakhtiyar tamin'ny Global Voices.
Iray monja amin'ireo fianakaviana mpitsoa-ponenana marobe antenaina ho tonga any Pakistan sy ireo firenena hafa mifanila aminy ny fianakavian'i Gull raha toa ka tsy tonga amin'ny fifanarahana fandriampahalemana ho an'ny firenena ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny Taliban, ny fitondrana ary ny mpitarika Taliban mipetraka tao Doha.
Ny manjò ireo vehivavy Afghàna
Iray amin'ireo vondrona tena voakasiky ny ady naharitra am-polony taona maro ny vehivavy Afghàna, izay miatrika zava-misy henjana sy vaovao amin'izao fotoana izao. Matahotra izy ireo fa ny fahaverezan'ny fomba fiainan'izy ireo sy ny fahazoan'izy ireo fanabeazana miaraka amin'ny fanitsakitsahana tanteraka ny zo fototra no miandry azy ireo eo ambany fitondran'ny Taliban.
Tamin'ny volana febroary lasa teo, fotoana ela talohan'ny nitrangan'ny krizy ankehitriny, nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety vehivavy natao tany Kabul. Anisan'ireo nasaina nanatrika izany ilay mpikambana ao amin'ny parlemanta Fawzia Koofi, ny talen'ny fanatanterahana ao amin'ny Tambajotram-behivavy Afghàna, Mary Akrami, ary i Palwasha Hassan, avy ao amin'ny Ivotoerana Fanabeazana ny vehivavy Afghana.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, nitaky “fampitsaharana ady avy hatrany, maharitra sy tsy misy fepetra” ireo vehivavy ireo ary fampitsaharana koa ny famonoana olona sivily, famonoana olona kinendry, fanandevozana ara-nofo mihatra amin'ny vehivavy ary ny fanaovana fanambadiana an-tery amin'ireo mpiady Taliban.
Nangataka fitoviana miralenta ihany koa ireo vehivavy tamin'ny fifampiraharahana fandriampahalemana, ary manasongadina fa raha tsy misy izany, dia mety hisy fiovana manafintohina amin'ny fahalalahana ho an'ny zazavavy sy ny vehivavy, indrindra raha mitantana ny firenena tsy misy fifehezana ny Taliban.
Raha niresaka tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'izany fotoana izany i Palwasha Hassan, ary nilaza fa, “tsy mba nanatsoaka lesona tamin'ny lasa [Ny Taliban], fa maherisetra kokoa sy mihantsy kokoa noho ny teo aloha. Tsy manana fahalalana na dia kely monja momba ny fitantanana firenena izy ireo, sy ny hoe inona izany Afghanistan iombonana, na ny lanjan'ny fandraisan'ny vehivavy anjara amin'ny fananganana firenena. Any amin'ny faritra sasany fehezin'ny Taliban ohatra, dia voaràra tsy hianatra an-tsekoly ny zazavavy aorian'ny fahamaotiana, izay manitsakitsaka ny lalàmpanorenana Afghana. Mipoitra ireo tatitra momba ny fanaparitahan'ny Taliban didy, fa tsy tokony hiasa ny vehivavy, tsy mahazo fampianarana na mandao ny tranony tsy misy mahram [lehilahy iray rà, toy ny anadahy, ray na vady]. “
Efa ela ireo vehivavy Afghana sivily mpitarika no nitolona tamin'ny ady sarotra. Izy ireo no tena mizaka ny herisetran'ny mpampihorohoro, ary nijaly nandritra ny fifandonana mafy indrindra ireo vehivavy sy ankizy Afghana. Araka ny tatitry ny Firenena Mikambana Mikarakara ny Iraka Fanampiana any Afghanistan, mandrafitra ny 46 isanjaton'ny sivily lasibatra izy ireo ary mbola marefo hatrany amin'ny fotoana ho avy. Araka ny filazan'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovana sy ny Filaminana ao Afghanistan, vondrona milisy iraisam-pirenena 20 farafahakeliny no miasa ao Afghanistan, hanafika ireo lasibatra malefaka maro ny ankamaroan'izy ireo mba hahazoana faritany fanampiny.
Tamin'ny herintaona, nisy ireo andiana famonoana nikendry olona manokana teo amin'ireo vehivavy mpanao gazety, mpiaro ny zon'olombelona ary ireo vehivavy miasa ao amin'ny fitsarana tampony. Voatifitra teo amin'ny sandriny ilay mpikambana parlemanta sady mpanelanelana Fawzia Koofi tamin'ny taona 2020, saingy tafavoaka velona tamin'ny fikasana famonoana azy ary niverina tamin'ny fifampiresahana fandriampahalemana tao Doha ho toy ny iray amin'ireo mpandray anjara vehivavy vitsy. Maneho ny fahasahian'ireo vehivavy Afgana izay nitolona ho an'ny zon'izy ireo nandritra izany dingana sarotra izany ny ohatra nasehony.
Ary na eo aza ny vinavinan'izy ireo somary manjavozavo, manohitra sy mandà ny hangina izy ireo.
Tsy maintsy omen’ izao tontolo izao voninahitra ireo feo miteny ny iray amin'ireo toe-javatra sarotra indrindra eto an-tany.
Taona 2021 izao, ary efa lasa ny fotoana nahitantsika mazava ny vehivavy Afghana teo amin'ny toeran'ny mpamily nandritra ny dinika fandriam-pahalemana, tsy toy ny valisoa fotsiny noho izay niaretan'izy ireo nandritra ireo taona maro niadiany, fa noho izy ireo mpitondra matanjaka sy be herim-po manoloana ny ho avy tsy azo antoka.